Saron’ny mpanara-maso (MICA): nasaina namidy amin’ny vidiny ara-dalàna ny vary nafenina | NewsMada
Propagation du Coronavirus : la fermeture des frontières entre en vigueur ...mars 20, 2020
Kamiao “citerne” latsaka tao ambany tetezana: vehivavy iray maty tsy tra-drano, olona iray mbola karohina ...mars 20, 2020
Covid-19 semaine cruciale : 5.000 personnes en attente de tests rapides
Telo ny tranga vaovao, tafakatra 46 tratran’ny coronavirus : hotiliana an-kalamanjana ireo mpandeha avy any ivelany
29 mars 1947: l’Etat n’oublie pas les martyrs de la Nation
Tafakatra 43 ireo tratran’ny coronavirus: vazaha iray marary efa any ivelany nitety faritra maro teto amintsika
Le bilan passe à 26 cas confirmés : vers un durcissement du confinement
Tafakatra 26 izao ireo tratran’ny coronavirus: niampy telo ny voa, avy amin’ny fifampikasohana ny iray
Fihanaky ny valanaretina: nitombo efatra ka tafakatra 23 ireo tratran’ny coronavirus
Désinformations, dénigrements…: le président monte au filet
Lutte contre le coronavirus : le Président rend hommage au personnel médical
Hahazo fanohanana ireo mpiasan’ny fahasalamana: tsy nitombo ny isan’ireo tratran’ny Covid-19
Saron’ny mpanara-maso (MICA): nasaina namidy amin’ny vidiny ara-dalàna ny vary nafenina
Par Taratra sur 23/03/2020
Mitohy ny fitsirihana ataon’ireo mpanara-maso (contrôleurs sy commissaires du commerce) ao amin’ny minisiteran’ny Indostria, varotra, sy asa tanana (MICA) ny vidin’entana eny an-tsena sy ny tahiry. Manao toy izany koa ny foibe any amin’ny faritra. Nohamafisina izany, tamin’ny herinandro teo ka nandraisana fepetra avy hatrany, niaraka tamin’ny mpitandro filaminana mihoatry ny 50 ny famoahana ireo entana ilaina andavanandro niniana nafenina; ampiharana, araka ny tokony ho izy, ny vidin’ireo entana ireo ; ampiharina ny sazy amin’ireo mpanaraotra tratra.
Tamin’izany fanaraha-maso izany, nisy mpivarotra tratra nanafina vary teny Andoharanofotsy sy Tanjombato, fomba hoentina hampiakarana ny vidim-bary. Noterana navoaka ireo vary ireo ary namidy amin’ny vidiny ara-dalàna. Azo inoana fa mbola mety hisy trangan-javatra toy izao any ho any, ka mitaky hatrany ny hitohizan’ny fanaraha-maso sy fampiharana ny sazy, ho fiarovana ny zon’ny mpanjifa.
Niverina amin’ny laoniny izao amin’ny ankapobeny ny vidin’ny PPN. Niverina toy izany koa ny famatsiana, indrindra amin’ny fahatongavan’ny entana nafarana sy ny vokatra avy eto an-toerana. Ampy mandritra ny enim-bolana ny lafarinina vokarina eto an-toerana, miampy ny hafarana avy any ivelany sy ny varim-bazaha. Mizotra tsara koa ny famatsiana menaka sy ny vidiny tokony ho izy, araka ny tatitra nataon’ny Mica ihany.
Tsy hijanona ny fanaraha-maso sy ny fijerena akaiky ireo mpivarotra entana ilaina andavanandro. Hiparitaka eny amin’ireo boriborintany enina eto Antananarivo ireo mpanara-maso ireo miaraka amin’ireo mpitandro ny filaminana ka mihoatry ny 80 izy ireo no hidina isan’andro.
Photo du jour 31 Mars 2020 31/03/2020
Vangaindrano : vols de matériels médicaux au CHRD 31/03/2020
Bongolava : vigilance renforcée contre le coronavirus 31/03/2020
CCO Covid-19 : Sicam-CFAO apporte son soutien 31/03/2020
Rocade Nord Est-Est : les travaux de construction suspendus 31/03/2020
Coronavirus, d’un point de vue astrologique